दिल्लीले ओली र प्रचण्डलाई भाइ कांग्रेस बनायो
नारायणमान बिजुक्छे नेपाली वाम राजनीतिमा आदर्श नेताका रूपमा परिचित छन् । उनी साँचो कुरा बोल्न कसैसँग डराउँदैनन् । भावनामा नबग्नु र आवेगमा नआउनु उनको विशेषता हो । बिजुक्छे जे बोल्छन् यथार्थ बोल्छन् । प्रस्तुत छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का अध्यक्ष बिजुक्छेसँग समसामयिक सन्दर्भमा नेपाल समयले गरेको कुराकानी -
तपाईं अचेल राजनीतिमा पहिला जति सक्रिय देखिनुहुन्न नि ?
मेरो स्वास्थ्यमा समस्या छ । घुँडा दुख्ने रोग छ । फिजियोथेरापी गरिरहेको छु । मेरी पत्नी पनि बिरामी भएकाले उपचारमा बढी संलग्न हुनुपरेको छ । त्यसैले राजनीतिक गतिविधिमा कम देखिएको हुँ ।
पार्टीको कामचाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
पार्टी काममा मेरो संलग्नतामा कमी आएको छैन । काम विभाजन गरेको छु । अरू साथीहरूले बढी समय दिनुहुन्छ । बाहिर जानुपरे साथीहरू जानुुहुन्छ । नजिकका ठाउँमा म पनि जाने गरेको छु ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खुम्च्याउन थाल्नुभएको हो ?
त्यो होइन । परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको हो ।
तपाईं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा खम्बा हुनुहुन्छ । अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारले कस्तो काम गरिएको देख्नुहुन्छ ?
अरू कुरा त छोडिदेऊँ, उहाँंहरू आफैंले लेखेको घोषणापत्रअनुसार पनि काम भइरहेको छैन । कम्युनिस्टले गर्ने काम गर्नुभएको छैन । भूमिमा किसानको मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न सक्नुभएको छैन । हामीले नेपाली जनतालाई काम दिने हो, विदेश पठाउने होइन । तर अहिले त युवा बेचिएसरह भएका छन् । बजारमा युवाको मूल्य तोकिएको छ । कम्युनिस्ट सरकारले गर्ने काम हो यो ?
यो कम्युनिस्ट सरकार त हो नि ?
हामी यसलाई कम्युनिस्ट सरकार मान्दैनाै । यसमा कम्युनिस्ट सरकारको कुनै चरित्र छैन ।
यसको चरित्र कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
जमिन जोत्नेको नाम हुने व्यवस्था र मोहियानी हकलाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । युवालाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुनुपथ्र्यो । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यस्ता कुरामा सरकार चुकेको छ ।
ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेको कुरा ऐतिहासिक होइन र ?
उनीहरूमा कम्युनिस्ट चरित्र छैन । उनीहरूबाट कम्युनिस्टले गर्ने काम भएको छैन । त्यसैले यसलाई कम्युनिस्ट एकता भन्न मिल्दैन । मैले त यिनीहरूलाई पहिलादेखि नै भाइ कांग्रेस भन्दै आएको हुँ ।
दुई पार्टी मिल्नुको कारणचाहिँ के होला ?
यो भारतको डिजाइन हो ।
एमाले र माओवादी कोचाहिँ भारततिर ढल्केका हुन् ?
व्यवहारले दुवै उस्तै देखिन्छन् । माओवादी भारतमै जन्म्यो, भारतमै विकसित भयो र भारतकै हतियारले नेपालमा उपद्रो गर्‍यो । पुल उडाउने, स्कुल ध्वस्त पार्ने लगायतका धेरै विध्वंस गर्‍यो । एमालेले महाकाली सन्धिमा सही गरेकै हो । उनीहरूबीच अहिले भारतले मेल गराइदियो ।
माओवादी भारतमै जन्म्यो, भारतमै विकसित भयो र भारतकै हतियारले नेपालमा उपद्रो गर्‍यो । पुल उडाउने, स्कुल ध्वस्त पार्ने लगायतका धेरै विध्वंस गर्‍यो । एमालेले महाकाली सन्धिमा सही गरेकै हो । उनीहरूबीच अहिले भारतले मेल गराइदियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन भारतीय डिजाइन छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, भारतको बदनाम गराउने डिजाइन छ । नेपाली जनता र चीनबीचको सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ । जुन कुरा भारतलाई मन पर्दैन । यसका साथै नेपालमा माओत्सेतुङ विचारधाराको प्रभाव छ । त्यो पनि भारतलाई मन पर्दैन । माओत्सेतुङ विचारधाराको नामबाट चीनलाई हान्छांै भन्ने भारतीय डिजाइन हो । सो डिजाइनअनुसार भारतले माओवादका नाममा पार्टी गठन गर्न लगाएर देशलाई क्षतविक्षत गर्न लगायो ।
तपार्इंहरूसँग चाहिँ एकताका लागि प्रस्ताव आएन ?
आएको छैन । आएको भए त्यो प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो । हामी सधैँ उनीहरूको आलोचना गर्दै आएका छौं । सैद्धान्तिक रूपले उनीहरू 'डिफेन्स' गर्नै सक्दैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा धेरै कम्युनिस्ट दल उदाए । उनीहरूले समाजवाद नामको टोपी लगाएका थिए । पछि त्यो टोपीको ठूलो बदनाम भयो । त्यसलै हामीले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राखेनांै । म एकपटक दैलेखमा एक कार्यक्रममा थिएँ । त्यहाँ एउटा प्रश्न आयो, 'लाइट आँउदै छ रे हो ?' लाइट भनेको के हो भनेर बुझ्दै जाँंदा 'नक्सलाइट' भनेको रहेछ । त्यसबेला भारतमा नक्सलाइट आन्दोलन चलिरहेको थियो ।
एमाले-माओवादी एकतामा कुनै स्वार्थले काम गरेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दल एक भएर एमालेलाई एक्लै पारेको भए एमाले चुप लागेर बस्दैनथ्यो । भारतको विरोध त भइहाल्थ्यो । यो स्थिति आउन दिनुहुन्न भनेर भारतले आफ्नो भाइ नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदिएको हो ।
नेपाली राजनीतिका दुई पात्र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सक्रियतालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
यी दुवै सक्रिय छन् । पानीमा डुब्न लागेपछि हातखुट्टा त चलाउनैपर्‍यो । उनीहरूसँग अर्को उपाय छैन । अन्तिम पलसम्म लड्ने विधि हो यो । कि पानीमा बग्न तयार हुनुपर्‍यो, नभए पौडन हातखुट्टा चलाउनैपर्‍यो । उनीहरू बगे भने इतिहासको फोहोर फाल्ने भाँडोमा पुग्नेछन् ।
एमाले र माओवादी मिल्दा एमालेकरण भयो कि माओवादीकरण ?
न एमाले न माओवादी, खराब जति सबै एक भएका हुन् ।
एकीकरणपछि पनि नेकपामा विवाद देखिएको छ नि ?
त्यो उनीहरूको हातको कुरा होइन, बाहिरको कुरा हो । उनीहरू बाहिरले मिल भने मिल्छन् फुट् भने फुट्छन् ।
दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले पाँंचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ला त ?
यो पनि बाहिरको हातमा छ । उनीहरू देश र जनताको हितमा काम गरेर स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढे भने बाहिरले मिल्न दिँदैन । माओवादीले भारतमा बसेर गतिविधि गर्दा हामीले बाबुराम र प्रचण्डलाई भेटेका थियौं । हामीले उनीहरूलाई भनेका थियौं, 'तपार्इंहरूले भारतले भनेजस्तो काम गरेमा हाम्रो देश गयो, उसले भनेको नमाने तपाईंहरूको ज्यान गयो ।' मार्नु भनेको पदले मार्नु हो, विचारले मार्र्नु हो । अहिले त्यस्तै भएको छ ।
नेपालमा किन भारतको मात्रै हस्तक्षेप हुने गर्छ ?
खुला सिमाना छ । अहिले त माइक्रो मेनेजमेन्टमा पनि भारतको संलग्नता हुने गरेको छ । निर्मला हत्याकाण्डमा सकारले किन अपराधी समाउन सकेको छैन ? एसपी डिल्लीराज विष्ट परिवार र बम दिदीबाहिनी परिवारसँग प्रचण्डजीको घनिष्ट सम्बन्धले पो यस्तो अवस्था आएको हो कि ? पहिला एसपी विष्टले कुन सालमा जगिर खाए, उनको कहाँकहाँ पोस्टिङ भयो, कुनकुन बेला बढुवा भयो ? यी कुरा बाहिर आउनुपर्छ । मैले घटनामा सरकार संलग्न छ भन्न खोजेको होइन तर अपराधीलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । सुनिन्छ, प्रधानमन्त्री यस विषयमा दबाबमा छन् । त्यो कसको दबाब हो ? अपराधीलाई छोयो भने सरकार ढल्छ । त्यसलाई जोगाउने शक्ति भारत नै हो । भारतमा भए पनि अपराधी पक्राउ पर्थे । नेपालमा भए पनि पक्राउ पर्थे । अब त्यो अपराधी नेपालमा रहेको भारतीय राजदूतावासभित्र हुनुपर्छ भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
भारत सबै नेपाल चाहन्छ । प्रदेश नं २ अब रहँदैन भन्ने छ । २ नं को संकेत भनेको उता मिल्नु हो । यसको दोषी एमाले र माओवादी हुन् । कांग्रेस त पहिलादेखि नै 'प्रोइन्डियन' हो ।
स्थिरता र समृद्धिका कुरा बेकारका हुन् त ?
यो सरकारलाई कमजोर बनाइन्छ । प्रशासन संयन्त्र पनि कमजोर बनाइन्छ । सबै भारतीय दूतावासको इसारामा चल्छन् । सरकारले कुरा एउटा गर्छ, काम अर्को भइरहेको हुन्छ । मैले भनेको कुरा सुन्दैनन् भनेर प्रधानमन्त्री त्यसै कराएका होइनन् । कुनै काम गर्न वा रोक्न भारतीय 'इन्ट्रेस्ट' कै दबाब हुन्छ ।
उत्तरी छिमेकीको चाहिँ केही भूमिका हुँदैन ?
उनीहरू सीधै भन्छन्, 'हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं ।' उनीहरू पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध राख्छन् । उत्तरको बाटो बन्द छ । सरकारले यसमा चासो दिएको छैन ।
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन भारतको भूमिका थिएन ?
एकदमै थियो । यसको पछाडि पनि स्वार्थ छ । उनीहरूलाई चीनतिर जान मन लागेको थियो । कोदारी राजमार्गमा राजा नामको ठूलो ढुंगा छ, त्यसलाई हटाएपछि बाटो खुल्छ भन्ने थियो । भूकम्पले बाटो छेक्यो । परम्परागत राजतन्त्र बदल्न गाह्रो हुन्छ । तर यिनीहरूलाई त बदल्न सजिलो हुन्छ । त्यही भएर नेकपाका नेताहरू दिल्ली दौडमा जाने गर्छन् ।
राजनीतिक आवेगमा राजतन्त्र फालेर गल्ती भएको हो त ?
सामन्ती, अर्धसामन्ती, औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर विन्दु भनेको राजतन्त्र हो । हेर्दा बलियोजस्तो देखिए पनि भित्र मकाइसकेको हुन्छ । पुरानो भइसकेको वस्तुलाई सानो धक्का दिएपछि गइहाल्छ । पुरानो रूख हावा आएपछि ढल्छ । तर यसलाई पठाउन हावाचाहिँ दक्षिणबाटै आएको हो । यस मामिलामा त दक्षिण र पश्चिम सबै मिल्छन् ।
नेपालमा संघीयता टिक्ला त ?
म राज्य पुनर्संरचना समितिमा थिएँ । ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरू त्यो समितिमा कहिल्यै पनि आएनन् । कसैले महिलाको अलग प्रदेश चाहिन्छ भन्थे, कुन ठाउँ हो त्यो प्रदेश भन्दा कुनै एक ठाउँको नाम लिन्थे । लेखेर दिनुस् भन्दा भोलि दिन्छौं भन्थे अनि एनजिओमा जान्थे । उसले जे भन्यो त्यो बोकेर आउँथे । दलितको अलग प्रदेश मागेर आउँथे, जनजातिको अलग प्रदेश मागेर आउँथे । कसैले नेपालको झन्डा फेर्ने र कसैले देशकै नाम फेर्ने कुरा लिएर आउँथे । झन्डा राजामहाराजाले राखेको भनेर तर्क गर्ने कामसम्म भयो । अनि सूर्य र चन्द्र नदेखिने देश कहाँ छ भन्दा ६ महिनासम्म उत्तरी धु्रवमा रहन्छ भनेर कुतर्क गर्नेसम्मका काम भए । संघका कुरामा सत्ताको खेल जोडियो ।
संघ कस्तो बनाउने भने स्विजरल्यान्डको आफ्नै मोडल छ । सोभियत संघको अलग परम्परा छ । भारतको त अर्धसंघ राज्य मात्रै हो । अमेरिकामा केन्द्रले प्रदेशका गभर्नरलाई कुनै दबाब दिन सक्दैन । दबाब दिन सेना पठायो भने गभर्नर सर्वोच्चमा जान्छ र सेना फिर्ता पठाउने आदेश दिन्छ । भारतले केरलामा कम्युनिस्ट सरकारलाई तीनपल्ट भंग गर्‍यो । अनि हामीले चाहेको मोडल के हो भन्ने अन्योलमै संघ घोषणा भयो । संघमा जानुअघि राजनीतिक पार्टीहरूले आफू कुन मोडलमा जाने भन्ने दृष्टिकोण नै बनाएनन् ।
संविधान जारी हुँदा अहिलेका कतिपय मुख्यमन्त्री पनि संविधानसभामा थिए । उनीहरूले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूलाई कस्तो संघ भन्ने थाहा नभएको भए के आधारमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसको अर्थ उनीहरूले जानकारीबिना सही गरे । संघीयताका धेरै मोडलमा छलफल नभएको होइन । तर बाउछोराले गधा चढेको उखानजस्तो भयो । जसले चढे पनि नहुने, नचढे पनि नहुने अनि गधा छोडेर भाग्ने जस्तो भयो । अहिलेको संघीयता भद्रगोल मोडलको हो । सरकारमा बस्नेलाई के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन । प्रदेशसभामा गएर कुनै पनि दुनियाँमा प्रधानमन्त्रीले भाषण दिएको मलाई थाहा छैन । हाम्रोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातवटै प्रदेशसभामा गएर भाषण दिए । त्यो गलत थियो ।
तपार्इंले हरेक चिजमा दक्षिणको प्रभाव भन्नुभयो, धर्म निरपेक्षतामा चाहिँ के भयो नि ?
भारत रिसाएको धर्म निरपेक्षता भयो भनेर हो । उनीहरू सीधै भन्थे, 'हिन्दु राजा राम्रो छ, राजा हाम्रा पनि हुन् ।' नेपालमा धर्म निरपेक्षताका लागि पश्चिमाको हात छ । यस माध्यमबाट उनीहरू नेपालमा क्रिस्चियानिटी बढाउन चाहन्थे ।
यो सबै गरेर भारतले नेपालसँग के चाहन्छ ?
अलि प्रसंग बदलौं, राजतन्त्र गए पनि शैली फेरिएन भन्ने यसपटक दसैँमा राष्ट्रपति निवासमा भएको टीका प्रकरणले पुष्टि गरेन ?
मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि केही सामन्ती संस्कारसँगै आएका छन् । त्यो घटना पनि त्यस्तै हो । सत्तामा बस्नेको समान्तवादी दृष्टिकोण भएकाले त्यो देखिएको हो । यो घट्दै जान्छ कि बढ्दै जान्छ जनतामा निर्भर हुने कुरा हो । जनताले विरोध गरे र उनीहरू डराए घट्छ नभए बढदै जान्छ ।